It is me. Ko Niknayman.: မင်း ရှေ့တစ်လှမ်းတက်ခဲ့ပါ။
ကိုယ့်ကို ကိုယ် ပေးဆပ်ဖို့ကလွဲရင်၊
UN ကိုလည်း မျှော်မနေနဲ့၊
Human’s Right Council လဲ အလကားပဲ၊
ပီနဲရိုးလဲ မမျှော်နဲ့ ၊
(ရေးသားသီဖွဲ့ သူ မေမင်းဆက်)။
Posted by Ko Niknayman at 6:12 PM